7 Xeelado Loo Adeegsaday Sirdoonka Qiimeynta Qeexitaan | Martech Zone
Talaado, Juun 30, 2015 Monday, June 29, 2015 Douglas Karr
At IRCE, Waan awooday inaan la fariisto Mihir Kittur, aasaasaha iyo Sarkaalka Cusboonaysiinta Ugam, xog weyn Analytics madal awood u siineysa shirkadaha ganacsiga inay sameeyaan ficillo waqtiga-dhabta ah oo kordhiya waxqabadka dakhliga. Ugam ayaa lagu soo bandhigay munaasabada si looga hadlo qiimaha iyo sida shirkadaha ay uga fogaan karaan dagaallada qiimaha. Iyada oo la adeegsanayo calaamadaha dalabyada macaamiisha ee laga soo ururiyey khadka tooska ah isla markaana loogu dhisayo istaraatijiyadaha qiimeynta macaamiishooda, Ugam wuxuu awood u yeeshay inuu hagaajiyo waxqabadka qaybta isagoo ku wanaajinaya noocyada iyo waxyaabaha ay la socdaan qiimaha.
Waa kuwan 7 Istaraatijiyadaha Qiimeynta ee la qeexay
Lasocodka Qiimaha Tartan waa hab lagula socdo qiimaha tartamayaasha si loo helo faham wanaagsan oo ku saabsan boosaska tafaariiqleyda ee suuqa. Sirdoonka Qiimaha iyo Kormeerka Qiimaha Tartanka ayaa badanaa loo isweydaarsadaa.
Dabacsanaanta Qiimaha waa cabirka sida iibkaaga alaabtu uga jawaabayo isbeddelka qiimaha tartame.
Qiimo u goynta dynamic waa fikradda ah waxyaabaha qiimahoodu ku saleysan yahay xaaladaha suuqa ee isbeddelaya. Waa dhaqanka lagu go'aaminayo sicirka si firfircoon (qaab dareeraha ah) oo ku saleysan saadka, baahida, nooca macaamiisha iyo / ama arrimo kale, sida cimilada.
Sirdoonka Qiimaha waa dhaqanka helitaanka faham wanaagsan oo ku saabsan booskaaga qiimaha suuqa marka loo eego tartankaaga. Waxay u ogolaataa tafaariiqleyda inay ka feejignaadaan khiyaanooyinka heerka suuqa isla markaana ay aragti ka yeeshaan oo ay ka warqabaan saameynta ay ku leeyihiin ganacsiga.
Sicirka Sicirka waa codsiga ah Analytics saadaaliya dhaqanka macaamiisha ee heerka suuqyada yar yar isla markaana dejiya helitaanka wax soo saarka iyo qiimaha si loo kordhiyo kobaca dakhliga Ujeedada koowaad waa iibinta badeecada saxda ah macaamiisha saxda ah waqtiga saxda ah qiimaha saxda ah.
Qiimayaasha Xeerarka Ku-saleysan waa habka loo qoondeeyo sicirka badeecada iyadoo lagu saleynayo xeerarka / qaaciidooyinka. Nidaamku wuxuu gacan ka geystaa in isla markiiba la hirgeliyo isbeddelada sicirka miisaanka kasta oo si muuqata u yaraanaya dayactirka qiimaha. Qiimo u goynta dynamic waxaa lagu hirgeliyaa Qiimaynta Ku-saleysan Xeerarka (ie, "Haddii qiimaha tartamiyuhu u dhaco X, qiimaheena wuxuu aadayaa Y," "Haddii wax soo saarku ku yar yahay liiska, kor u qaad qiimaha Z."
Qiimo dhimista casriga ah is Qiimo u goynta dynamic oo leh heer dheeri ah oo sirdoonka macaamiisha ah oo ku saabsan arrimaha Calaamadaha Bulshada (tusaale, dib u eegista wax soo saarka, Facebook jecel, Twitter-ka, iwm.)
Waad ka akhrisan kartaa wax walba oo ku saabsan Sirdoonka Qiimaha (halka aan ku helay qeexitaannadan) gudaha Sirdoonka Qiimaha Ugam eBook, bilaash si aad u soo dejiso.
Ugam Qiimaha Sirdoonka iyo Isu-hagaajinta xalka waa xal SaaS ku saleysan oo isu keenaya iskuna daraya xogta waqtiga dhabta ah ee tartanka, calaamadaha elektaroonigga ah, xogta macaamil ganacsi, xogta tafaariiqleyda, iyo xogta dhinac saddexaad si loo fahmo waxa macmiilku u doonayo inuu bixiyo, iyo qiimaha si caqli ku jirto waqtiga dhabta ah.
Tags: Dabacsanaanta QiimahaLasocodka Qiimaha TartaneBookbarafMihir KitturSirdoonka QiimahaSicirka Sicirkabintasirdoonka qiimahaQiimayaasha Xeerarka Ku-saleysanQiimo dhimista casriga ahxalalka ugam
9 Tilmaamaha Qaab-dhismeedka Qaadashada Sawirro Cajiib ah